မမသီရိ: August 2009
တမင်တကာ.. သခင်ထား ပြီလာ့..
လွမ်း ပုံ ကကြွယ်......။
စက်လဲ မပျော် ညဉ့်တွေက များ
ကျော်သွားတဲ့ နေ့တွေက အလီလီ
အလွမ်း ပန်းချီတွေ သာ စီခဲ့ရ ရာသီလုံး...
ဟို ဒီ ပွေ စိတ်လေရူးရယ် နဲ့
ရနံ့ ထုံ ပန်းစုံတောမှာ
ရင်မော ကာ ပူပုံပမ်း... တမ်းတ နေတယ်.....။
Posted by မမသီရိ at 8/31/2009 07:15:00 PM
ပုလဲလေး တလုံး ပျောက်သွားလို့
ပုလဲလုံး အရှာ ထွက်... ကြေကွဲရတဲ့ နေ့ရက်တွေ.......
ရင်ထဲမှာ တကြော်ကြော် အော်လို့
ပုလဲပျောက် အရှာ... သူ..ထွက်ခဲ့ပါတယ်......
လမ်း ခုလပ် တနေရာ
မတွေ့မိပါဘူး ကလေး ရယ်
မင့် ပုလဲလုံး လေး ဘယ်လို တွေ့မလဲ
ငါ ကိုယ် တိုင်က အရွက်မဲ့နေရတာပါ..... တဲ့......
ခေါင်းင်ိုက်စိုက် ရှေ့ကို ဆက်
တွေ့ခဲ့ပြန်ပေါ့ မြစ်ကလေး တစင်း...
သူလဲ အတင်း ငြင်းရှာတယ်..
ငါ ကိုယ် တိုင်က ခမ်းခြောက်နေခဲ့တာပါ..... တဲ့......
သူ ကလေး လှမ်းထွက်
ရင်တွင်းမှာလဲ ရေတွေ ဆူလို့..
ဟော ..ဟို မှာ..
သူတော့ သိတန်ကောင်းပါ ရဲ့....
ယုံကြည်ခြင်းတွေ ပြန်ရှင် သန်...
ကျမ ရဲ့ ပုလဲ လုံးလေး.........
အမောတကော ပြေးလာ.. ဖြေ....
တွေ့ပါသော်ကော.. ကောင်မလေး ရယ်...
ဒါပေမဲ့... သမုဒ္ဒရာ က စကား ပါးခဲ့...
မင့် လည်ဆွဲဘ၀ ဖြစ်ခွင့် မကြုံ နိုင်မှတော့
၀ဋ်ကြွေး မကုန်တဲ့ ဒီပုလဲ
သူပဲ ထာဝရ သိမ်းဆည်း လိုက်တော့ မတဲ့........
လှိုင်းကလေး စကား အဆုံး..
ကောင်မလေး ချုံးပွဲ ချငို...
တိမ် ညိုတွေလဲ ပြိုခဲ့ပေါ့ ..
ဟောဒီ့ ကမ္ဘာ တခုလုံး.. တိတ်ဆိတ် သွားခဲ့ ပုံများ............
သစ်ရွက်လေးတွေ အသက် မရှူတော့....
ကြယ်ကလေးတွေ မျက်တောင် မခတ်တော့.....
သဲပွင့်လေးတွေ တုတ်တုတ် မလှုပ် တော့....
လေပြေလေးတွေ လမ်း ဆက်မလျှောက်တော့....
ပန်းပွင့်လေး တွေ မရီမောတော့...
လိပ်ပြာလေးတွေ.. အတောင်တွေ သိမ်းရုပ်....
တိမ်တွေ ညီလာခံတာ ..ရပ်....
ဟောဒီ့ ကမ္ဘာ တခုလုံး.. တိတ်ဆိတ် သွားခဲ့ ပုံများ..............။
(ပျောက်ဆုံးသွားသော ပုလဲလေး တလုံး အတွက်..)
Posted by မမသီရိ at 8/29/2009 07:27:00 PM
အလွမ်းတွေ တိုက်စားသွားတဲ့ ..ည.. ဟာ
တဖြည်းဖြည်း ပါးလျ လာခဲ့လိုက်တာ
အလင်းမှုန် ယဲ့ယဲ့ လေး တွေတောင် ပြုံးပြ..
ရှင်းလို့ မလင်း နိုင်သေးသရွေ့
အလွမ်းနွံ ထဲ ကျွံ ဆဲ
ဒုက္ခ သစ္စာ .. ဒီ ဆင်းရဲ...
ပြုံးပြုံး လေးပဲ နှစ်သက်နေ.....
ပင်လယ်အတွင်း.. ရေဆင်းချိုးတဲ့.. နေ..
ကမ္ဘာ တဖက်.. လေညင်းခံထွက်တဲ့ .. လ .
ဒီကမ္ဘာ ဂြိုလ် နှစ်ပါးခွင်မှာ
ကတော့ က ပါရဲ့ ထာဝရ..
အဲဒီ ကမ္ဘာခြား ဝေဒနာ လေး ကိုပဲ
ခေါက်ရိုးကျိုး နေတဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့
အသားကျ နေခဲ့ပြီးပြီ မို့..
မက်မော မနေတော့ ပါဘူး လေ....
သူ့ကို ငါ.. တကယ်ချစ်ခဲ့တာ ပါ.....။
Posted by မမသီရိ at 8/27/2009 08:54:00 AM
မလျှောက်လှမ်းလိုပါဘူး ကလေးလေး ရယ်...
မင့် မျက်ဝန်း ညိုညို တွေ
အဝေး က ငေး ရုံလေးပါပဲ....။
မင့် အပြုံး မှုန်မှုန်တွေ
မင့် ကိုယ်ငွေ့ နွေးနွေး
အဝေး က တွေး ရုံလေးပါပဲ...။
တနေ့ ပြီး တနေ့ ကြီးလာခဲ့
နှလုံးသားလေး က နဂိုနေရာမှာ ရပ်တန့်
ခံစားလွယ်လွန်း သူ လူကလေး အတွက်
အကြင်နာ ၀တ်ရုံလေးတခု ခြုံပေးချင်တာက လွဲပြီး.....
လမင်း လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့ ည
အိပ်မက်ဝိုင် ချိုချိုကို အိပ်မက်ထဲ ပဲ အတူသောက်
အိပ်မက်ထဲ မှာပဲ အတူတူ ရှိနေရုံက လွဲ ပြီး...
ကသစ်ပန်း နီနီ တွေ
အစီအရီ ပွင့်တဲ့ ရာသီတခု
တိမ် အကြွင်း အကျန်တွေ စုလို့ မြေသြဇာကျွေး
အိပ်မက်ထဲမှာပဲ ပြုစု မွေးထားတာက လွဲပြီး....
မင့် ချစ်ခြင်း အကြင်နာတွေ ....
အတူတူ ရောဖောက် ရက်ထားတဲ့
ကော်ဇော ပြာပြာလေးတချပ် ..
အတူတူ ထိုးစိုက် အလှဆင်ခဲ့တဲ့
ရောင်စုံ ပန်းအိုးလေး တလုံး
ကျမ ထာဝရ သိမ်းထုပ်ပေးသွား မှာက လွဲပြီး....
စိန်စီသော လမ်းကိုလဲ မလျှောက်ခဲ့ချင်..
(ကလေးလေး ရယ်.. )
မှန်တာပြော သစ္စာ လို့ဆိုခဲ့ရင်..
တို့...ဆံပင်တွေ သိပ်မဖြူ ကြခင်..
တွေ့ ကို တွေ့ ချင်တာပေါ့နော်...
ခွဲခြား စိတ်ဖြာ ကြည့်လိုက် တဲ့ အခါ....
မင်းရဲ့ နာကျင် ကြေကွဲခြင်း အထွေထွေ
ကျမရဲ့ ဆူးပြွမ်းတဲ့ ဒဏ်ရာ ဗရပွ
အသီးသီး အ.သ.က.. အ.သ.က..
စီးကျလာတဲ့ နှလုံးသွေး ကိုယ်စီကို...
အနီရောင် ၀ိုင်ပုလင်းထဲ ထည့် .. ချိပ်ပိတ်..
နောင်ဘ၀ တခု မှာ အတူဖွင့်ကြဖို့ တံဆိပ်နှိပ်..
မျက်ရည်တွေ ကိုယ်စီနဲ့...တို့... .
တ်ိတ်တ်ိတ်လေး.. ငေးကြည့်နေကြ ရုံ.........။
Posted by မမသီရိ at 8/21/2009 05:25:00 PM
ရှုပ်ထွေးပွေလိမ် လောကအိမ် ထဲ
အလည်တခေါက် သင်ရောက်ခဲ့ ပြီ...
ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရင်း.. ကျင်လည်ရင်း နဲ့
မြင်ကွင်း မျိုးစုံ ဘ၀ဘုံတွေ
သင်ကြုံခဲ့ ရ တွေ့ခဲ့ရ ပြီ....
သင့်ပတ်ဝန်းကျင် ရှုမြင် သုံးသပ်
လောဘ.. ဒေါသ.. မောဟ တွေနဲ့
တဏှာ ဖုံးလွှမ်း အာသာ ငမ်းတက်
ကျင်လည် ကျက်စား.. ဘ၀ ကိုမေ့ထား..
စား.. နေ.. ၀တ်. ဝဲသြဃထဲ
သံယောဇဉ် ဆိုတဲ့ နွယ်မျှင်တွေ နဲ့
ချစ်ခြင်း.. မုန်းခြင်း.. ၀န်တိုခြင်းတွေ
တွေ့ခြင်း ဆုံ ခြင်း ခွဲခွာ ခြင်းတွေ
တွယ်ငင်ရစ်ပတ် ရုန်းမရ ပဲ
ထွက်ပေါက်တွေ ပိတ် ကြိတ်မှိတ်ပြီးနေ..
လူ့ဘ၀ သက်တမ်း တကယ် တိုတယ်ဆိုတာ
သင် ကိုယ်တိုင် ပဲ .. သတိမထား.. မေ့ထားမိ ခဲ့....
ပျော်စရာ တလှည့်.. ငိုတလှည့်နဲ့
ကုလားထိုင်ပေါ်တခါ တက် .. အောက်ရောက်တခါ..
စာဖွဲ့ မကုန်..လောကီ ဘုံထဲ
အချိန်တန်ကြောင်း .. ဧည့်နှင်မောင်း.. သံ
သင် နာခံ ခိုက်....
သင့် အိမ် အမှန် သင် ပြန်ရတော့ မှာ......
ငို ရှိုက်သံများ.. သင် ကျော်လွှားလို့
သင့် ရဲ့ နောက်မှာ .. သင်ပိုင်ထင်ထား
သင့် အိုးအိမ် ယာ..ရတနာနဲ့
ရွှေထီး ရွှေ နန်း.. ရွှေ ကြငှန်း ရော..
ပါဝါ အာဏာ.. အင်ပါယာ ရော
ရွှေ ငွေ စည်းစိမ်.. ဂုဏ်ရှိန် သိန် စက်
သံယောဇဉ် ဖွဲ့ ချစ်တဲ့ သူများ....
အပြန်လမ်း မှာ.... ဘာ မှ မပါ....
တိတ်ဆိတ် ငြိမ် သက်... ထီးတည်း မဲ့ လို့..
သင် နဲ့.. သင် ပဲ .. တယောက် တည်းရယ်...
အလည်ရောက်ခဲ့ တဲ့..လောကအိမ် အပြင်ဖက်
သင်... ထွက် ..တဲ့ ..အခါ.........။
ကျမရဲ့မှတ်တမ်းစာ အုပ် အဟောင်း တခုထဲ ပြန်တွေ့မိတဲ့ ကဗျာ တပုဒ်ပါ..။ နေ့စွဲ အရဆို နှစ်ပါင်း ၂၀ ပြည့်ပါတော့မယ်.။ အဲဒီ တုန်းက ကျမမှာ အသက် ၄၀ အရွယ် ဦးလေး ၀မ်းကွဲ တယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်.. ငယ်ငယ်တုန်း ကတည်းက စာတော် တယ်၊ ရုပ်ရည် သန့်သန့်ပြန်ပြန့် စမတ် ကျကျ မို့ ကြိုက်သူ တွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့တယ်.. ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို အထင်ကြီးလွန်းတော့ အသက် ၄၀ ထိ မိန်းမ မရနိုင်သေး.. ။ ခေတ်ပြောင်းတဲ့ ကာလ တခု မှာ မြို့ နယ်တခု ရဲ့ ဒုတိယ အကြီးဆုံး အာဏာပိုင် ဖြစ်နေခဲ့တာ မို့.. သူတာဝန်ကျ ရာ မြို့ကလေးရဲ့ ဒုတိယ ဘုရင်ခံ ဆိုလဲ မမှားဘူးပြောရမှာပါ. အစ ထဲကမှ မာန ကခပ်ကြီးကြီး.. အတ္တ က ခပ်ကြီး ကြီး.. တော်ရုံ လူ ..လူမထင်ရတဲ့ အထဲ..ဘ၀င်က ခပ်မြင့်မြင့် မှာ.. အကြောင်းသင့် လို့ အာဏာ က လက်ထဲ အလိုလို ရောက်လာတော့.. ဘေးနားမှာ ခစား သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည် ပြီး.. ကျမ ရဲ့ ဦးလေး ငယ်တယောက် က တကဲ့ ဘုရင်ခံ ကလေး လို ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့..။
ဆွေမျိုးတွေထဲမှာ တူတွေ တူမတွေ အရင်း ရော ၀မ်းကွဲတွေ ၁၀ ယောက် ကြားထဲ မှာ.. ရုပ်ဆိုး ပေမဲ့.. ခင်မင် နှစ်လိုဖွယ်ရာ.. သွက်သွက်လက်လက် ချက်ချက်ချာချာ ရှိတဲ့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ရုပ်ဆိုးဆိုး ဒီ တူမလေး ကို သူ အတော် ချစ်ပါတယ်..။ အသက် ငယ်ငယ် နဲ့ သူနဲ့ စာဖတ် ဖက်.. ဆွေးနွေးဖက် .. ရတာ ကိုး...
အပေါ် က ကဗျာ က အသက် ၄၀ ပြည့်ခါနီးလေးမှာ မှ ရီးစား ထားဖို့ သတိရတဲ့ ဦးလေး ကို သူ့ ရဲ့ အသက် ၄၀ ပြည့် မွေးနေ့ အတွက် ကျမပေးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကဗျာလေး ပါ.. ဒီကဗျာ ရေးတုန်းက အဲဒီ ဦးလေး ကို ကျမ မျက်စိစပါးမွေး စူးခဲ့တာ လဲ အမှန်.. သူကတော့ တာဝန် အရလို့ ပြောပေမဲ့.. ကျမအတွက်တော့ မနှစ်သက်ဖွယ် ရာ ကိစ္စတွေ မြင်နေရ ကြားနေရတော့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် အကွက် ရတုန်း ကဗျာ လက်ဆောင် ပေးခဲ့မိတာပေါ့... သူ့ ခမျာ ၀မ်းသာ အားရ မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကဗျာ ဆို လို့ ဖတ်လဲ ပြီးရော.. မုန့်ဖိုး မရတဲ့ အပြင် .. မျက်နှာတွေ နီရဲ ပြီး.. ကျမ ကို ထရိုက်တော့ မလို ဖြစ်ခဲ့ တာ ခု ထိ မြင်ယောင်နေပါသေး တယ်.....
မနေ့ ကတော့ စာရွက်ဟောင်းတွေ စာအုပ်ဟောင်းတွေ ပြန်လှန် လှော ရင်း ဒီကဗျာလေး တွေ တော့.. ကျမရဲ့ ဘဘကြီး၊ ဘဘလေး၊ ဘဘလတ် နဲ့ .... (.....) တွေ အတွက် လက်ဆောင်ပေး ဖတ်စေချင်တဲ့ စိတ်ကလေး ပေါ်လာလို့..
အင်းး... ဘဘကြီး တို့ ကျမ ကို နရင်းပိတ်တီးချင်စိတ်တော့ မပေါ်လောက်ပါဘူး နော့........။
(ဒီကဗျာ လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ဦးလေး က လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်က ကချင်ပြည် နယ် တနေရာမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတုန်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပါ ပြီ)
Posted by မမသီရိ at 8/20/2009 09:58:00 AM
ဘယ်လိုပဲ ချစ်ရ ချစ်ရ..
ညဉ့်နက်နက်တွေလဲ လှောင်ပြီပေါ့ ချစ်သူရေ...။
ရူးသွပ်စွာ... ရူးသွပ်မိသူ ..ငါ..
မင်းရဲ့ ကိုယ်ငွေ့ လေးကိုတောင်
ရူးသွပ်စွာ တပ်မက်မိသူ ငါ...
သံစဉ်တွေ အတွက်... ၀မ်းနည်းခဲ့ရသလို..
မင်း အတွက်ပါ... လို့...ပြောလာမဲ့
မင်း ကို ချစ်လိုက်တာ လို့
ပြောလာမဲ့ စကားလေး တခွန်း ရယ်...
အဲဒါ ရင်ထဲက ပါ ဆိုတဲ့
အနမ်းလေး တပွင့် ရယ်...
ကဲ အတူတူ လျှောက်ရအောင် ဆိုပြီး
ကမ်းလာမဲ့ လက်ကလေး တဖက်ရယ်....
မနက်ဖြန် ဆိုတာတွေ ရှိနေသရွေ့
ငါ မျှော်လင့် နေမိအုံး မှာ..
ငါ ..မျှော်လင့်နေမိတာ.. ဆန်းမလား ကွယ်....။
Posted by မမသီရိ at 8/17/2009 04:02:00 PM
မင်း ထိုင် ဆို ထိုင်
ထ ဆို ထ ပေးမဲ့
အရုပ်ကလေး တရုပ် က ငါ..
မင်း လာ ဆို လာ
သွား ဆို ထွက်သွားပေးမဲ့
မင်းငို ဆိုရင် ငို
ရီ ဆိုရင် ရီ ပေးမဲ့
အရုပ်ကလေး တရုပ် က ငါ…
မင်း ဆို ဆို ရင် ဆို
က ဆို ရင် ထက မဲ့
မင်း ပြောသမျှ ခေါင်း ညိတ်
မင်း ခိုင်းတိုင်း လိုက် လုပ်
အရုပ် တရုပ် လို လေ
အရာရာ မင်း အလိုကျ
မင်း ဆန္ဒ အတိုင်း ဖြစ်ရစေ့မယ်
အဲဒါ ချစ်လွန်းလို့ ပါ ချစ်သူ ရဲ့
မင်း ချစ်ဆိုရင် ချစ်
မုန်း ဖို့ ကို လာမပြောနဲ့
မင်း အဝေး နေရင် လွမ်း
မလွမ်းဖို့ ကိုတော့ လာမပြောနဲ့
(ဒီလို မျိုး ကျတော့)
မင်း ရဲ့ အရုပ်ကလေး ခေါင်းမာတယ်.. ။
Posted by မမသီရိ at 8/14/2009 05:07:00 PM
မောင်လေးရေ မငို ပါနဲ့ ပုံပြောပြမယ် ကွဲ့
ညီမလေးရေ မငိုပါနဲ့ ပုံပြောပြမယ် ကွဲ့
လူ မိုက် တတော ရဲ့ .. မှတ်သားဖွယ်)
အဲဒီပတ္တမြား.. ပိုလို့တောင်ရဲသွား သတဲ့
တိမ်မိုး တွေ ကြိုးစားကာ
အဲဒီနေမင်း ကတော့ သူ့ဖာသာ လင်း မြဲ တဲ့
အိုးထဲ ထည့်ဖို့ ကြံ
အပြုံး မပျက် အဲဒီငှက်
အရောင်စုံ တောင်ပံဖြန့် ပျံဖို့ အသင့် တဲ့
အကြံကုန် ဂဠုန် ဆားချက်
ပညာရှိတွေ ရယ်ပွဲ ဖွဲ့
ညီမလေး နဲ့ မောင်လေးရေ
မင်းတို ဘ၀မှာ ရှောင်လေ ရှား
အဲသလို ဘ၀ နဲ့ ငမိုက်သား ....။
Posted by မမသီရိ at 8/12/2009 09:34:00 AM
Labels: ကဗျာ, ကလေး ကဗျာ
အဲဒီ မှောင်မိုက်တဲ့ညတွေ ပေါ့
ကျမ ရိုက်ချိုး ဖျောက်ဖျက်ပြစ်ချင်တာ
အဲဒီ ရိုင်စိုင်းတဲ့ သားရဲတွေကိုပေါ့
ကျမ နုပ် နုပ် စင်းချင်နေမိတာ
ဒီ သားရဲ တွေကြောင့်
ညီမလေး အဝေး မှာရှိနေရတာ
ညီမလေး ချစ်တဲ့မြေ မှာ ရှိမနေတော့တာ
ညီမလေး မေမေ့ ကို လွမ်းနေရတာ
ဒီ သားရဲတွေ ကြောင့်....
ညီမလေး ၀မ်းနည်း အားငယ် နေရော့မယ်
မုန်တိုင်းတွေ လွန်ရင်တော့ လှိုင်းတွေ ငြိမ်သွားမှာလေ
အလင်းရောင် ရှိနေတာ အသေအချာ ပါပဲ
တို့တွေ ပြန်ဆုံ ကြတဲ့ အခါ..
ညီမလေး ပါးပြင် ဖောင်းဖောင်းလေး
မမ သနပ်ခါးသွေး ပြီး လိမ်းပေးမယ်
သနပ်ခါး ဖွေးဖွေး နဲ့ ညီမလေး ကို
မမ မွှေးမွှေး ပေး ပေး မယ်..
၀မ်းနည်းနေခဲ့ ရတဲ့ ညီမလေး ကို
မမ ထွေးပွေ့ ထားပေးပါ့မယ်
မမ ရဲ့ အလွမ်းတွေ ကို လဲ
ညီမလေး နားလည်ပေးမှာ မမ သေချာတာပေါ့
ညီမလေး ဖေး မ ပေးပေါ့..
ရင်မော ကြရတာတွေ ခံစားချက်ခြင်း ဖလှယ်ကြမယ်..
ပင်လယ်ကမ်းစပ်တလျှောက် မမ တို့ ခရုကောက်ထွက်မယ်..
တောအုပ်ညို ခင်တန်းနဘေး လိပ်ပြာလေးတွေ လိုက်ငေး မယ်
မိုးကောင်းကင်ပြာပြာပေါ်က တာရာလေးတွေ တို့ရေ ကြမယ်
၀မ်းနည်း အားငယ် မနေနဲ့
မမ တို့ရဲ့ နေ့
ရှေ့မှာ မဝေးတော့ ဘူးကွယ့် နော်....။
(ချစ်သော ညီမလေး အတွက်)
Posted by မမသီရိ at 8/11/2009 09:58:00 AM
(က) မြို့သား ဆုတောင်း
ပရီမီယာ ဘောလုံးပွဲ စိတ်အေးလက်အေး ကဲ ချင်လို့
စပါး အထွက်ကောင်းမှ နှာခေါင်းပေါက်တွေ အသက်ရှူ ချောင်မှာမို့
(ဂ) မြို့သူ ဆုတောင်း
ကိုးရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲ တပိုင်းလေးတောင် အလွဲ မခံ နိုင်လို့
(ဃ) တောသူ ဆုတောင်း
စပါးအထွက်ကောင်းမှ သားလေး ကျောင်းပို့ နိုင်မှာ မို့..။
Posted by မမသီရိ at 8/09/2009 07:31:00 PM
ဤပန်းခြံသို့ သေနတ်ကို ကျည် အပြည့် ထည့်လာသူများ..
ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ရန် အမိန့်တော်ဦးထိပ်ရွက် လာသူများသည်
တေးသံ ကျူးရင့်လာကုန်သော လူထုကိုသာ တွေ့ ရှိရသည်။
လူအုပ်ကို ပြည်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲ ပစ်သည်။
ချောင်းဟက် ကာ လည်ကျသွား သည်။
ဤအခြင်းအရာ ကြောင့် လူထု သည်
ထိတ်လန့်ကာ ငြိမ် သက်သွားပြီး
ကျဆုံးသူများ အား ငေးစိုက် ကြည့်နေကြ သည်။
တဖြည်းဖြည်း ၀မ်း နည်း ကြေကွဲခြင်းလှိုင်းတံပိုးသည်
အေးစက်သော ဒေါသ သို့ ထိုးတက်သွားကုန်သည်။
သူတို့သည်... သူတို့၏ အလံများကို
လူသတ်သမားများ ၏ မျက်နှာ ရှေ့၌ လွှင့်ထူလိုက်ကြသည်။
အပြစ်ဒဏ်ကို တောင်းဆိုပါ ၏။
ငါတို့၏ အဖတိုင်းပြည်ကို သွေးဖြင့် ပေကျံစေသူတို့အား
ငါ သည်.... အပြစ်ဒဏ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါ ၏
ဤလူသတ်မှု ကျူး လွန်ရန် အမိန့်ပေးသူတို့အား
ဤ အလောင်းများပေါ်မှ ကုတ်ကတ်၍
ငါသည်... သူတို့နှင့် လက်ဆွဲကာ မေ့လျော့ရန် အလိုမရှိ..
ငါသည်...သူတို့၏ သွေးစွန်းလက်များ ကို ထိရန် အလိုမရှိ..
အရပ်ရပ်သို့ သံအမတ်ကြီးများ အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းကို ၄င်း..
အိမ်မှာပင် ကိုးကွယ် ကာ တဖြည်းဖြည်း ပျောက် ပသွားစေမည် ကို၎င်း။။
ငါ သည်... အလိုမရှိ..။
သူတို့အား တရားစီရင်ရန် အလိုရှိသည်။
ငါသည် သူတို့ အား..အပြစ် ဒဏ်ပေးရန်သာ အလို ရှိသတည်း..။
သူတို့ ကျဆုံးခဲ့သော ဤနေရာသို့
ငါသည် ငိုကြွေး ရန် လာခြင်း မဟုတ်..
ယခုတိုင် ရှိနေကြသူ သင် တို့အား ပြောကြားရန် ငါ လာခြင်းဖြစ်သည်။
လယ်တော ၌၄င်း ၊ လမ်းမပေါ်၌ ၄င်း..၊
စိမ်းစိမ်း နီနီ ပွင့်... ရဲရဲ တောက် လျက်ရှိသော
အို.. ကျဆုံးလေပြီးသော.. သွေးချင်း သားချင်း အပေါင်းတို့...
ငါတို့၏ ကျယ်လောင်သော အသံဖြင့်
လွတ်လပ်ရေး ကြွေးကြော်သံ ကို ဟစ်အော် လွှမ်းမော် ကြကုန်အံ့..။
ပျော်ရွှင်ခြင်းတေးသံဖြင့် အလျှံငြီးငြီးမြည်ဟီးနေပါ အံ့...။ ။
( ၁၉၆၈ ခု နှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့သေါ လင်းယုန်မောင်မောင် ပြုစုရေးသားသည့် ရဲခေါင်ပျောက်ကျား ချေဂွေဗားရား စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြပါသည်။ ဤကဗျာအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာ သို့ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ ပြန်ဆိုပေးခဲ့သည် ဟု စာရေးသူ လင်းယုန်မောင်မောင်က ၄င်း ၏အမှာစာတွင် ရေးသား ဖေါ်ပြထားပါသည်။)
ဤပန်းခြံတွင်း၌ သေဆုံးရသူများ အမည်ရှိ ကဗျာ သည်စိတ်ကူးယဉ်ကဗျာ မဟုတ်၊ တစ်ကယ့် အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကိုအခြေခံ၍ ဆရာကြီး နီရူဒါ၏နှလုံးသားမှ ခံစားချက် အပြည့်အ၀ဖြင့်စပ်ဆိုခဲ့သည့် သရုပ်ဖေါ် ကဗျာဖြစ်သည်။
၁၉၄၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့က ချီလီပြည် စန်တီယာဂိုမြို့ မြို့လည်ပန်းခြံ ကြီးတွင် အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲအား..ချီလီ အစိုးရအဖွဲ့ကသေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်၍ လူစုခွဲခဲ့ ရာမှအလုပ်သမား အများအပြား ကျဆုံးဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။ ယင်း အဖြစ်အပျက်သည် တောင်အမေရိက တိုက် တစ်တိုက်လုံးကို ဂယက်၇ိုက်ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ရာ၊ အလုပ်သမားများ သွေးမြေကျခဲ့ရသည့် ယင်းအဖြစ်အပျက်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ခဲ့သည့် ဆရာကြီးနီရူဒါသည် ချီလီအစိုးရ၏ လူမဆန်သော ရက်စက်မှုများကို နိုင်ငံတစ်ကာမှ ပြည်သူများသိကြားစိမ့်သောငှာ ဤကဗျာဖြင့် လှုံ့ဆော် ကြွေးကြော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by မမသီရိ at 8/07/2009 08:49:00 AM
ထက်မြက်တဲ့ ငှက်ကလေးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်..
မင်း ခွန်အားတွေ ပြည့်စေဖို့
တေးသီချင်း တချို့ ကို
ထာဝရ မင်း အနားမှာ .. ဖေးမ ကာ နေမယ်လေ....။
ပန်းတို့ ရဲ့ ရာဇ၀င်မှာ
ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့ အလှပ ဆုံး..
စကြ၀ဠာ ရဲ့ အမွှေးမြဆုံး
လှရေးချယ်တဲ့ ပန်းကလေးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်....
မင်း ထာဝရ လှပ ဖို့..
ခူးလဲ မခူး.. (ရူးချင်လဲ ရူးသွား ပါစေ..)
နမ်းလဲ မနမ်း.. (ပင်ပန်းချင် ပင်ပန်းပါစေ..)
ပန်းကလေး မင်း အတွက်..
အသက်ရှင်တဲ့ ရက်တွေ ကို
မင်းဘေးမှာ ပဲ ကုန်ပါစေ ကွယ်....
တောင်ကုန်းလေး တခု ဆိုပါတော့
တောင်တကာတို့ ရဲ့ အလယ်မှာ
သစ်တောအုပ်စိမ်းစိမ်းဘ၀ နဲ့ ထွေးပွေ့ပါ့မယ်
လေနုအေးအသွင် မင်းကို ကြည်လင်စေမယ်
တို့သာ ဖြစ်နေပေး မယ်.လေ..။
စမ်းချောင်းလေး တခု ဆိုပါတော့
စမ်းချောင်းတို့ ရဲ့ သမိုင်းမှာ
ကြည်လင်ခြင်းတို့ ရဲ့ အသန့်စင်ဆုံး
ရေတကာတို့ ရဲ့ အအေးမြဆုံး..
သဘာဝတရား ရဲ့ အခရာ.. မင်းသာဖြစ်ပါစေကွယ်..
အစဉ်ထာဝရ မင်း... စီးဆင်းစေဖို့
လိုအပ်တဲ့ ရေအတွက် မိုးစက်လေး တို့ ဖြစ်နေမယ်..
အေးမြခြင်း အတွက်..သစ်ရိပ်လေး တို့ ဖြစ်နေမယ်..
မင်း.. အတွက်.. ဖြည့်ဆီး ဖို့.. အမြဲ အဆင်သင့်
ရင်ခွင်တံခါး ကို ဖွင့်လို့.. တဘ၀ လုံး စာ .. မင်း အတွက်ပါပဲ ကွယ်....။
(ကျမရဲ့ ကလေးလေး အတွက်ပါ..)
ဒီကဗျာက အစတုန်းက ၄ ပိုဒ် ထဲပါ..။ တနေ့ ကျမရဲ့ ကလေးလေးကို ဘာများ ဖြစ်ချင်သလဲ လို့မေးကြည့်မိတော့ သူက ထူးထူး ဆန်းဆန်း တောင်ကုန်းလေး ဖြစ်ချင်သတဲ့..း)...။ ဒါနဲ့ ပဲ ကျမရဲ့ ကဗျာလေးက နောက်ထပ် တပိုဒ် တိုး ခဲ့ ရတော့တယ်..း)....။
Posted by မမသီရိ at 8/03/2009 06:43:00 PM
မွှေးမွှေး ရီရီ ပါးကွက်လေး
ကဗျာဟောင်းလေး တပုဒ်ပါ။ အလွန်ချစ်စရာ ကောင်းသော ကျမရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲ တယောက်ရဲ့ သမီးလေးကို ကြည့်ရင်းရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး တပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တူမ ပိစိကွေးလေးက ခုတော့ တက္ကသိုလ် ရောက်နေပါပြီ။
Thanks to Oatara Cho being as Model in this Post.
Posted by မမသီရိ at 8/02/2009 11:59:00 AM